नेकपा विभाजनको संकट १० दिन धकेलियो - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज फिचर नेकपा विभाजनको संकट १० दिन धकेलियो
नेकपा विभाजनको संकट १० दिन धकेलियो
दूई जना पाइलट बसेर हाँक्न खोजेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पछिल्लो चरणमा फुटको संघारमा पुगेर पनि बाल बाल बचेको छ । खास गरेर दुई पाइलटबीच आरोप र प्रत्यारोपका पर्चा छरेर एक अर्काको राजनीतिक भविष्य सिध्याउने खेलमा लागेपछि उक्त दुर्घटना हुन लागेको थियो तर मन्त्रीपरिषद्को एक घण्टा पर सरेको बैठक र प्रधानमन्त्री समेत रहेका पाइलट समेतको सहभागी भई आफ्ना कुरा राखे पछि उक्त संकट १० दिन पछाडि धकेलिएको छ । सो नेकपाको सचिवालय बैठक कसरी १० पछाडि धकेलियो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न अड्कालबाजी भए पनि प्रधानमत्री तथा केपी शर्मा अ‍ोलीले आफ्नो तयारी नपुगेको कारण देखाए पछि अर्को बैठक मंसिर १३ गते बस्ने निर्णय भएको छ । सचिवालय बैठक मात्र नभएर स्थायी कमिटी बैठक १८ गते र केन्द्रीय कमिटी बैठक २५ गतेलाई तय भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।
सो सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ममाथि लगाइएका आरोप, लान्छना, अभियोग, तिरस्कार, अपमान सबैलाई खारेज गर्छु भनेका छन् । राजनीतिक जीवन सिध्याउने गरी लागेको आरोप पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्छु।’ अरु के के भने प्रधानमन्त्री ओलीले–
आजको सचिवालय बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ । म सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन बैठक धेरै जटिल मोडमा छ, पार्टी निकै जटिल मोडमा छ । सामान्य अवस्थाबाट पार्टी पनि गुज्रिराखेको छैन, हामी पनि गुज्रिराखेका छैनौं ।म एक दुईवटा कुरा राखौं । अस्तिको बैठकमा केही कुराहरू जस्तोकि बैठकको एजेण्डाको रुपमा होइन, पत्राचारका रुपमा, जस्तोकि पाँच जना साथीहरूले मलाई बैठक बोलाइयोस् भनेर पत्र दिनुभयो । त्यसमा गम्भीर आरोपहरूसमेत भएको हुनाले मैले बैठक बोलाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, ती आरोपहरू अनुत्तरित हुन पनि सक्दैनथे । मैले त्यसको जवाफ किन दिनुपर्‍यो ? वास्तवमा ती आरोपहरू सही थिएनन्, अनुपयुक्त, अनुचित, झुठा र भ्रमपूर्ण थिए, तिनको बारेमा मैले स्पष्ट पार्नु नै जरुरी थियो । त्यसकारण मैले व्यक्तिगत तवरमा नै अगुवाई उहाँको भएको हुनाले अर्का अध्यक्षलाई पत्र लेखें । र, त्यस पत्रको जानकारी बोधार्थका रुपमा पत्र बुझाउन आउने साथीहरूलाई त दिएँ नै, अरु साथीहरूलाई पनि जानकारीका लागि दिएँ । त्यसको प्रत्युत्तरमा चाहिँ अर्को ७ पेजको जवाफ अर्का अध्यक्षले लेख्नुभयो । त्यसको जवाफ मैले दिएको छैन । स्वभाविक रुपमा त्यसको पनि उचित जवाफ दिनुपर्ने छ । त्यसबाहेक त्यसै दिन एउटा प्रस्ताव भनेर अर्का अध्यक्षले मलाई दिनुभयो, अरु सदस्यहरूलाई पनि बाड््नु भयो । त्यो बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव होइन । बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हाम्रो विधि भिन्नै छ । एउटा अध्यक्षलाई जानकारी नभइकन अर्का अध्यक्षले कुनै पनि प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । त्यस्तो दिनुपर्ने पनि कुनै अवस्था आउला, तर अर्का अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिइकन, अर्का अध्यक्षमाथि हमला, प्रहार, आलोचना, आरोप र अभियोगसहितको प्रस्तावका नाममा अचानक त्यो मलाई दिनुभयो । अरु साथीहरूलाई पनि वितरण गर्नुभयो । तर, त्यो बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव होइन । त्यसलाई विधिसम्वत प्रस्ताव भन्न मिल्दैन । तर, त्यस सम्बन्धमा कमिटीमा छलफल आवश्यक छ । त्यो प्रस्ताव भनेर जो वितरण भयो, त्यसपछि जुन अखवारबाजी गरियो । यसो गर्नु उचित भयो कि भएन ? केही मतलबको कुरा भएन । अखवारबाजी गर्नका लागि समेत त्यसो गरिएको थियो र त्यसमा केही साथीहरूको संलग्नता र सहमति भएको पनि जानकारी भयो । त्यसो भएर यो विषय धेरै गम्भीर छ ।मैले अस्ति दुई जना कमरेडहरूलाई बोलाएर कुरा गरेँ, वामदेवजीसँग कुराकानी गरेँ र भनेँ कि यसको छिनोफानो नभइकन, यी आरोपहरूसहित, यी आरोप बोकी बोकीकन कोही पनि मानिस अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न त मिल्दैन । यी आरोपहरू या त त्यसबाट बदर हुनुपर्‍यो, तब प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्न मिल्छ । त्यसो होइन भने सदर हुनुपर्‍यो र ती पदहरू र ती जिम्मेवारीबाट हट्नु पर्‍यो । यो हटाउने माग त पहिलेदेखि आएकै थियो । तर, यसपटक हट्ने आधारहरू यी हुन्, यसकारण हट्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । पहिलेजस्तो यसमा सोझै प्रधानमन्त्रीबाट हट, अध्यक्षबाट हट भन्ने भाषा छैन । तर त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कोटेड भाषा रहेको छ । त्याग भन्ने शब्द त्यहाँ राखिएको छ । यस सम्बन्धमा पहिले छिनोफानो हुनुपर्छ । यो आरोप या त सदर ठहरिनु पर्‍यो, अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नु पर्‍यो । यो आरोप सही ठहरिंदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्‍यो, यसको जवाफदेही लिनुपर्‍यो ।
अघिको समचार पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ गते (सन् २०२० नोभेम्बर १९ तारिख) विहीबार : ॐ जय श्री कृष्ण गोविन्द बासुदेवाय नमः
अर्को समचार सूर्यको उपसनासहित सांस्कृतिक पर्व छठ मनाइँदै